VITAMIN D-GA OO HOOS U DHIGA KHATARTA QAYBO KA MID AH CANCER-KA AH | Toggaherer's Weblog
DAWLADU WAXAY KA SHAQAYSAA INAY BEELAHU KALA FOGADAAN REERKAYAGA H/YOONIS CUQDAD WEYN AYAY KA QABAAN
VITAMIN D-GA OO HOOS U DHIGA KHATARTA QAYBO KA MID AH CANCER-KA AH
Vitimin D-ga oo Hoos u Dhiga Khatarta Qaybo ka mid ah Cancer-ka
Khubar ku xeeldheer cilmiga Science-ka oo u dhashay dalka Maraykanka, ayaa sheegay in Vitamin D-gu uu yarayn karo khataraha qaar ka mid ah noocyada uu ka kooban yahay cudurka Cancer-ku.
Khubaradaasi waxa ay dib u eegis ku sameeyeen 63 cilmi-baadhiyeed oo hore loo sameeyey, kadibna waxay ogaadeen in Vitamin-diigu yareeyo fursadaha uu ku faafi karo ama uu horumar u samayn karo noocyada Cancer-ka, kuwooda ugu khatarsan sida Cancer-ka naasaha dumarka ku dhaca “breast cancer” iyo cancer-ka nooca dhaxalka ku yimaada ee loo yaqaan Colon cancer.
Cilmi-baadhistan ayaa laga soo dhoweeyey jaamacadda California, laakiin waxay haddana ka digayaan khubaradu in qaadashada Vitamin D xad-dhaaf ah ay dhibaato ballaadhan gaadhsiin karto kelyaha iyo beerka, iyaga oo intaa raaciyey in loo baahan yahay in la sameeyo baadhis intaa ka dheer.
Vitamin D-ga dabiicaga ah ee loo yaqaano D3, ayaa caadiyan waxaa soo saara jidhka ka dib marka qofka jidhkiisu loo Qorax ku filan helo, waxa kale oo laga heli karaa Cutooyinka qaar sida Kaluunka saliida leh, margarine-ka, cabbitaanada tayadooda la kordhiyey iyo hilibka.
Cilmi-baadhistan oo lagu sameeyey Jaamacadda California ee ku taal Sandiego ayaa waxa ay eegeysaa xidhiidhka ka dhexayn kara vitamin-D-ga ku jira dhiigga iyo khatarta cancer-ka.
Waxa ay sheegayaan Khubaradu qaadashada 1000 unit oo caalami ah (IU) ama 25 microgram oo vitamin-D ah maalin walba waxa 50% yaraan karaya khatarta noocyada cudurka sida breast cancer-ka, ovarian-ka iyo colonka.
Sida ay sheegeen culimadu qaadashada 2000 oo unit ama 50 micrograms oo vitamin D ah waxay keeni karaysaa in jidhku qaato calcium fara badan, taas oo suurtogal ka dhigaysa in uu burbur ku yimaaddo beerka iyo kelyaha.
Professor Cedric Garland oo isagu hoggaaminaya hawsha dib-u-eegista ah, ayaa sheegay in laga heli karo Vitamin D tayo sare leh iyada oo aan jidhka loo dhigin qorraxda, kaas oo uu sheegay in laga helo cuntooyinka caadiga ah iyo kuwa tayadooda la kordhiyey. Professor Garland waxa dadka aan jidhkoodu qorraxda u adkaysan karayn uu uga digay inay isu dhigaan qorraxda, maxaa yeelay ayuu yidhi, “taas qudheeda ayaa dhibaatadeeda leh.”
Waxa soo Tarjumay: Osman Abdillahi Sool…..Freelance Journalist.